18 Jir Soomaaliyeed oo u Baahan Gargaar Aadamino
Sawirkaan aad aragtaan waa wiil 18 jir ah oo soomaali ah. magaciisuna waa Cabdulkarim Issaq Qassim. waxuu kudhaawacmay muqdisho sanadkii 1993 kaddib markii xaafada uu daganaa ay isku dagaaleen ciidamaddii UNISOM ta iyo kuwa dabley ah. waxaa caloosha kagashay 12 xabo oo rasaas ah.
Dhaqtar pakistani ah ayaa isku deyey inuu qalo balse waa uu ku guuleysan waayey. hadda calooshiisa oo dhan waxaa kujira tuubooyin si ay ukala wadaan si kumeel gaar ah.
Cabdulkarim waxaa uu hadda joogaa magaalada nairobi xaafadeeda Eastleigh meeshaasoo hadda uu kula nool yahay aabbihiisa oo 80 jir camool ah.waxaa dhacda in daawa iyo dhaqtar iska dhaafe aysan heli saddexda waqti cuntada.
waxaan ka codsanaynaa hay'adaha iyo shaqsiyaadka daneeya dadka dhibaateesan in ay taageero bini aadamino u fidiyaad Cabdulkarim Issaq Qassim oo ay kala soo xiriiri karaan� ABDIKADIR AHMED MOHAMED oo loo yaqaano "king soogaarey" telefoonkiisa +254-722-992205.
Waxaa SomaliTalk soo gaarsiiyey: Abdullatiff Osman abdullatiff@sahannet.com